Fact talk/खांटृी कुरा: कथा
लघु कथा: 'बुझाई' र 'सल्लाह'
By: janak dangol on November 15, 2014 / comment :0कथा
लघु कथा: ‘बुझाई’
कथाकार: जनक मान डंगोल ।
पंचायती सासनको २०३६ साले बहुदल र निर्दलको चुनाव हुनु भन्दा केहि बर्ष अगाबै पुर्ब बाट बसाई सरेर पौडेल बाजे औधोगिक नगरीमा बस्न आई पुगे ।
‘जन पक्षीय’ भन्ने थेगो जनजिब्रोमा बिस्तारै झुण्डीदै थियो । ‘थाहा’ दर्शन बाट प्रभावित भएर अहोरात्र समाज सेवामा लागेका र भूमिगतकालमा भएका नेताहरु समाजमा देखिन डर मानेको प्रतिफल पंचायती वडा चुनावको वडा अध्यक्ष देखि तिनको कामको प्रभावले गर्दा प्रजातन्त्रको दुवै निर्वाचनमा वडाबासीले बिजयी गराई दिए ।
कथित जनयुद्धले चरम रुप लिएको बेला ति पौडेल बाजे माओबादीमा लागेका छन भनेर कोहि कसैले संकाधरी गरेका थिएनन ।
एक रात अन्दाजी रातको ११ बजे तिर छिमेकको ढोका ढकढक्याउन आईपुगे ।
ओहो अध्यक्षज्यु यति राति के काम आई पर्यो त्यस्तो ? छिमेकीले सोधे ।
लौ २५/३० जनालाई आज तपाईले खाना खुवाउनु पर्ने भयो ।
छिमेकीले जवाफ दिए त्यत्रो लाई सकिन्न ।
हैन जसरि पनि खुवाउनु पर्छ नत्र पछी अप्ठ्यारो पर्ला ।
धम्की मिश्रित जवाफले मन नलाई नलाई छिमेकीले खानाको तयारि गरे । खाना तयार भएसी छापामार खान आए त्यो हुलमा मिस्सिएर पौडेल बाजेले भने ‘खै यौटा थाल पाउ’ ।
छिमेकीले सहन नसकेर भने तपाइको घर यहि नजिकै हुँदाहुँदै मेरो घरमा खान खान सरम लाग्नु पर्ने हैन र ?
बढ्ता कुरा नगर्नुस नत्र ?
नत्र के गर्नु हुन्छ ? तर तपाईलाई म मेरो घरमा खाना खान अनुमति छैन ।
राजाले सासन हातमा लिए पछी स्थानीय चुनाब हुने भयो । चुनावको प्रचार प्रसार गर्दै तिनै पौडेल बाजे पुन: गाई चिन्ह लिएर उठे र ‘ल है फेरी सेवा गर्ने मौका दिनुहोस’ भन्दै तिनै छिमेका भोट माग्न आको देखेर छिमेकीले तिनको मुखा पुलुक्क हेरे मात्र तर केहि बोलेनन ।
स्थानीय पंच, त्यस पछी एमालेको सिपाही, माओबादीको स्थानीय नेता हुँदै फेरी पुरानै पंच जस्तै बनेका ति पौडेल बाजे देखेर हिजो आज गाम्घरका मुन्छिले राजनीति भनेको ‘जता मल्खु उतै ढल्कु’ रैछ भनेर बुझ्न थालेका छन ।
लघु कथा : सल्लाह ।
~जनक मान डंगोल
दाई मलेस्या कस्तो छ, मौषम देखि आम्दानी सम्म एकै स्वासमाँ सोध्ने ति मित्रलाई मैले प्रश्नको झटारो छोड़े ..
रक्सी पिउनु हुन्छ ?
चुरोट कत्तिको पिउनु हुन्छ ?
- दीनको एक बट्टा शिखर ।
मौक़ा परे केटी साथी बनाउनु हुन्छ ?
-जीबन भनेको मस्ती गर्ने हो मौक़ा पाये छोडींन्न !
जुवा, चिट्ठामाँ कत्तिको सोख छ ?
समय र धनले साथ दिये सम्म खेलिन्छ ।
न्यानो मौषम छ भन्दैमा त्यसो हो भने तपाई ९००/०० रिंगिट ज्यालाको लागि २ लाख दलाललाइ बुझाउदै अनेक दुःख कस्ट सहेर मलेसिया आएर यताकालाई धनि नबनाउनुस ।
'यु हामिल' (सत्य कथा)
By: janak dangol on October 31, 2014 / comment :0कथा
कथाकार जनक मान डंगोल
असंख्य हुलहरु मध्ये दुब्लो पातलो सरिर ख्याउटे गाला भएको सुदुर पूर्वको सामान्य गाउँ बाट मिठो सपना बोकेर मलेसिया छिरेको नेपाली कामदार जसलाई सबैले केपी भनेर बोलाउने गर्थे ! प्राय आइतवार म दिनको ओटी समेत गर्न जान्थे त्यहि बेला तिनी सिट भेटघाट गफगाफ हुन्थ्यो ! पुरा नाम कृष्ण प्रसाद अनि जातिले क्षेत्री ति मित्रको आसाम तिर पनि प्रसस्त जग्गा जमिन छ रे ! नेपाल घर झापा भएता पनि भारतको आसामे पनि अनि दुवै तिर बसोबास !
नेपाल बसाई हुँदाहुँदै भाई साथीको लहलहैमा लागेर नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका रैछन ! माओबादी जनयुद्दको बेला तालिम सकिए पछी कार्यक्षेत्र पनि आफ्नै जिल्ला परेछ ! एक दिन रातको गस्तीमा दोहोरो भिडन्त भएछ ! भिडन्तमा आफ्नै गाउँको मान्छे जो माओबादी छापामार थिए तिनको पनि मृत्यु भएको रैछ ! रातिको अन्धकारमा को दुस्मन को मित्र !
गाउँमा हल्लीखल्ली भएछ ! केपीकै गोलि लागेर मृत्यु भएको भन्ने हल्ला फैलियोरे ! कर्तब्यपरायणमा खटेको हुन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि बिना कारणको आरोप सहन नसकेर जागिर बाट भगौडा भएर मलेसिया हान्निएका रैछन केपी !
हप्ताको ६ दिन कामको भिड तर आईतवार बिदाको दिन केपी बिहान देखिनै मातेर हिड्ने ! आराम र फुर्सद हुना साथ हिजोको त्यो दोहोरो भिडन्तको घटना झल्झली सम्झिदा रैछन अनि भुल्ने कसरि भन्दा उही रक्सिको नसा !
एकै कारखानामा काम गर्दा रहंदा बस्दा इण्डोनेसियाको केटि 'याती' भन्ने सित जान पहिचान भयो ! जान पहिचान बिस्तारै माया प्रेममा बदलियो ! हुँदा हुँदा दुवै जना एक आर्काको सहारा बिना बाच्न नसक्ने सम्म भएछन ! याती केपीको रक्सि खाने बानि छुटाउन खोज्ने तर केपी छोडन नसक्ने ! यहि निहुँमा झगडा हुँदै धेरै पटक हातहालाहाल सम्मको स्थितिमा पुग्दा रैछन !
सदाझै आइतवार म केपीकै कम्पनिको नजिकको गेटमा डिउटी बसेको थिए ! केटि भाग्दै आई र केपीको साथिलाई च्याप्प समातेर भनिन 'आबांग तोलोंग साया, हारिनी पुन डिया माबु, तेंगो पुकुल साया, सिला तांकाप डिया' (दाई मलाई सहयोग गर्नुस, आज पनि मातेको छ, हेर्नुस मलाई कुटेको, कृपया समाउनुस उसलाई) !
'लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो' भनेझै थियो तिनीहरुको पिरती पनि ! केपी नेपाल जान लाग्यो भनेर थाहा पाउना साथ २ पटक आत्महत्याको प्रयास सम्म गरेकी रैछे केटिले ! सम्झाई बुझाई गरेर थामथुम पारेका रैछन ! प्रेम अन्धो हुन्छ भनेको यस्तै भएर होला त्यहि भएर केपी नेपाल जान सकेन !
कारखानामा गाईगुई हल्ला भयो 'यातीले भुडी बोकिछे भनेर' ! कम्पनि मालिकको मा कुरा पुग्यो ! मालिकले कार्यालयमा बोलाए र सोधे 'यु हामिल ? ( तिमि गर्भवती हो ?) घोसेमुन्टो लाई जवाफ फर्काउन सकिन ! मालिकले कड्किये रिसाए र पुन: सोधे 'यु हामिल, जवाब !
फुंग उडेको अनुहार त्यहि माथि डरले निलोकालो भो, हो भनु कि हैन भनु ! वाक्य फुटेन, आँखा बाट बग्यो टप टप बलेसी र चुहियो मालिकको कार्पेटमा ! मालिकले सोधखोज गर्दा केपीको भन्ने जवाफ पाए ! मालिकले ब्यंग्य कस्दै भने 'बालेक काम्पुंग जागा आनाक गुर्खा' (गाउँ जा र गोर्खालीको बच्चा हेरेर बस अब) !
पहिलाको घटना बिर्सिन खोज्दाखोज्दै आर्को घाउ थपियो ! पैला १/२ क्वाटर ले चित्त बुझाउने मान्छे अहिले ठुलै बोतलका बोतल रित्याउने सम्म भयो ! नेपाल जान मन नगर्ने र उताकाले पनि हार मानेर माया मारेको जस्ता भै सकेको रैछ !
धेरै बर्षको अन्तरालमा एकदिन बजारमा भेटे केपीलाई ! चिन्न नसक्ने भै सकेको रैछ ! भला कुसारी भयो ! अँध्यारो मुख लाउदै भन्यो चाहेर पनि मैले यातीलाई विह गर्न सकिन सर ! हुन पनि हो मलेसियामा बिहा गर्न ठुलै पापड बेल्नु पर्छ त्यै माथि याती परि अर्कै देसको ! मैले भने जे हुनु भै हाल्यो भाई सम्हाल र सक्छौ भने नेपाल हैन आसाम जाउ !
एक दिन केपीकै काम गर्ने कम्पनीको साथि भेट भयो ! कुरे कुरामा मैले के छ केपीको हालखबर भाइ भनेर सोधे ! पुलुक्क मेरो मुखमा हेर्दै भन्यो सरलाई थाहा छैन ? मैले भने के कुरा ? उसले भन्यो अघिल्लो महिना केपीले आत्महत्या गर्यो नि ! समुन्द्र घुम्न जाउ भनेर गाको फिट्टू थियो ! नजा भन्दा भन्दै पौडी खेल्न पसेको मान्छे ! निस्किन सकेन वा निस्किन मानेन ! अवाक भए म झल्झली आयो आँखामा केपी र फुंग अनुहार उडेको याती !
(पात्रहरु काल्पनिक हुन कोहि कसैको जिबन संग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ)
By: janak dangol on October 26, 2014 / comment :0कथा
तस्विर साभार: कथाकारको फेसबुक बाट
उसको गोजी बाट उसैको मोबाइल निकाल्न मलाई निकै गारो भयो! एक त उ आफ्नै रगतमा लतपतिएको थियो अनि निर्जीव र फेरी कम्मर भन्दा मुन्तिरको जम्मै अङ्ग क्षतिग्रस्त!
उसलाई पलास्टिक मा पट्टाएर शव वाहन मा हाले पछि मैले जिन्दगीको भरोसा गर्न नै छोडे... हुन पनि एक घण्टा पहिले हामीले संगै खाना खाएका थियौ। बिदेश फापेन उसलाई ।
त्यो दिन कसरी बित्यो मलाई यादै छैन! भोलिपल्ट दिनभर हामी शोकमा थियौं, समवेदना र अपसोचमा थियौँ !
उसको कान्छी श्रीमती को मिसकल झन्डै साठी सत्तरी पुगिसक्याथ्यो मेरो मोबाइल मा! फोन रिसिभ गर्ने हिम्मत जुटिरा थेन! फेरी कसरी एक्कासी सिउँदो पुछ्न भन्नु!
साँझमा त फोन उठाउनै पर्यो!
"खोइ त दुई दिन भै सक्यो , उहाको खबर छैन , कता हुनुहुन्छ ?"
मैले उनको जबाफ नदिएर उल्टै सोधे "अनि खानपिन भयो त हजुरको?"
"हजुर भयो नि, दुईजना छोरीहरू त खाएर निदाई पनि सके....!"
"अनि हजुरको बाबा कता हुनुहुन्छ ? संगै छन्?"
"उँहा संग आए पछि, बाबा त्यति बोल्नु हुन्न म संग.. छोरीहरू संग एक्लै छु म...!"
"सुन्नुहोस्.. अब जसरी हुन्छ बाबा र दाजु भाइ लाई फकाएर दुईटै छोरीहरू लिएर उनको घर जानुहोस्।"
"किन र !!! के भयो उनलाई ?"
"उहाँ हिजो दुर्घटनामा पर्नुभयो.. एक हप्ता भित्र सायद उहाँको लास आइ पूग्छ..." मैले यति भन्नलाई झन्डै पाँच मिनेट लगाएँ!
त्यस पछि उनको रुवाइलाई म बयान गर्न सक्दिनँ।
झन्डै पन्ध्र बिस मिनेट पछि मैले उनलाई निकै संझाएँ!
"हेर्नुहोस् अब घटना घटीसक्यो.. अब नाबालक छोरी हरूलाई सम्हाल्ने जिम्मा हजुरकै हो... जसरी हुन्छ छोरी हरूलाई लिएर उनको घर जानुहोस्।"
"म उहाँको घर जानै मिल्दैन, उहाँको जेठी र परिवार ले मार्छन्!! "रुवाइ अझै थियो आवाजमा !
"छोरी हरू उहाँकै हो भनेर त थाहा छ नि उहाँको परिवार लाई.. नभए पुलिस लिएर भए पनि जानुहोस्.. उनको इन्स्योरेन्सको पैसा हजुरलाई नमिले पनि छोरीहरू लाई मिल्नु पर्ने दबाब दिनुहोस् !"
उनी केही क्षण चुप लागिन र भनिन "यहा कुरा अर्कै छ.. यो दुईजना छोरी हरु उहाँको हैनन्.. उहाँ मेरो बुढाको साथी हुनुहुन्थ्यो .. हाम्रो घरमा उहाँको आवत जावत हुन्थ्यो... र कसरी कसरी हाम्रो प्रेम हुन पूग्यो .. र छोरी सहित मलाई भगाएका हुन!!"
म पूर्णत स्तब्ध भए.. त्यस पछि उनले के के भनिन् र मैले के के भने मलाई न याद छ न वास्ता नै!
भोलिपल्ट । उनलाई व्यक्तिगत रुपमा पठाउने भनेर जम्मा गरेको पैसा हरू मैले साथीहरू को नाम हेर्दै फिर्ता गरिदिएँ! लास नेपाल पूग्ने समय र मिति उनलाई सुनाएँ पछि मोबाइल को सिमकार्ड पनि चेन्ज गरे!
"देव"को अदालतमा कुन्नि कस्तो निर्णय होला तर मेरो अदालतले उसको तेर्हौ दिनमा ... समवेदना भन्न सकेन!
लघुकथा - भक्ति
By: janak dangol on October 19, 2014 / comment :0कथा
कथाकार: देव थापा
उनको धर्म परिवर्तन भएको लगभग तीन साल भयो!
त्यस पछि हाम्रो घरमा चाड पर्व मात्र आए उनी आइनन ! उन्लाई अकस्मात् टिका संग घृणा उत्पन्न भो, जमरा लाई सरापिन, यहाँ सम्म कि मेरो नाम संगै पनि उनको असहमति थियो!
"के नाम होला देव, बोलाउनै अप्ठ्यारो " कैले कैले बाटोमा भेट्दा उनी अप्ठ्यारो बोल्थिन्! म सोच्थे "कुन मन्दिर मा जान्छौ यात्री .......!" एउटा लाई घिन गरेर अर्को लाई पूज्ने कुन वाहियात धर्म रैछ त्यो!
बाबाले दुई बर्ष त तिहारमा कुर्नु भो पर्खिनु भो र रुनु पनि भो तर तेस्रो बर्ष चाहिँ यो घोषणा गर्नुभयो कि "बिचरी बहिनी मरीन!" मलाई पनि उनको खाली निधार देखेर हो जस्तै लाग्यो !
एकदिन ...ड्युटी सिद्धिए पछी मोबाइल हेरेको त बाबाको पन्ध्र मिसकल रहेछ! मैले हतार हतार कल गरे!
बाबाले हतार हतासमा भन्नु भयो उनको छोराको एक्सीडेन्ट भयो रे ! गाउँको अरू साथी पनि लिएर जानु.. पाटन हस्पिटल ! कुनै पनि काम पर्न सक्छ!
मैले बाबालाई नमस्कार भने मनमनै ! बाबा ज्वरोले थलिदा पनि उनको उपस्थिति थिएन तर बाबाको मनले कत्ति मिठो माफी दियो!
हामी दुईचार जना हस्पिटलमा थियौ! उनी एक्लै एमरजेन्सीमा टोलाएर बसेकी रै छिन ! हामी हतार हतार उनै तर्फ दौडियौ ! हामीलाई देखेपछि उनमा पनि अलिक साहस पलायो...
म नजिकै पुगेर उनलाई सोधे हतार र जोडले..
"बिष्णु दाई कता हुनुहुन्छ ?"
उनले आश्चर्य मानिन् "को बिष्णु दाई??"
"हजुरले बिष्णु दाई चिन्नु हुन्न!!!" मैले आश्चर्य सोधे!
"चिन्दिन तँ कसको कुरा गर्दैछस्!!??"
"हजुरको छोरा बिष्णु दाई...!" म जोडैले चिच्याएँ!
उनले हल्का कुटिल हासेर भनिन " एsss सिमसोन्... सिमसोन भन्न त अनि!"
'आस्था' (लघु कथा) !
By: janak dangol on September 15, 2014 / comment :0कथा
कमरेड लाल सलाम पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताले अभिवादन गर्दै दाहिने हात तेर्स्यायो !
मन नलाई नलाईकन हात मिलाउंदै जवाफ फर्काउदै भन्यो 'लाल सलाम' !
आजको कार्यक्रम थाहा छ हैन ?
प्रश्नको जवाफ फर्काउदै भन्यो थाहा छ !
अनि किन अहिले सम्म यतै देख्छु, कार्यक्रम सुरु हुने बेला भयो त पुन: प्रश्नको झटारो !
सहन सकेन उसले र रिस लाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर अनुहार साउने बादल बनाउदै भन्यो
म के गर्न लागेको छु अहिले थाहा छ ?
तपाई अहिले कुन ठाउँमा उभिनु भाको छ त्यो पनि थाहा होला !
मैले सयकडा ५ को ऋण काढेर यो ब्यबसाय चलाउदै छु ! मलाई मेरो शुभचिन्तकले ऋण नदिएको भए मेरो अहिले पाटीको बास हुन्थ्यो ! मेरो यो ब्यबसाय हेर्ने म बाहेक अरु कोहि छैन ! मेरो श्रीमती जापानी रोबोट हैनन, घरको धन्दा देखि बच्चा सम्म हुर्काउने जिम्मा उसको छ !
मैले मेरो पेसा लाई लात हानेर पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिदै हिड्ने हो भने म पुन: पहिलाकै जस्तै गरि पाटीको बासमा पुग्छु ! मैले जति गर्नु गरि सके अब गर्न सकिदैन ! आस्था र खोक्रो नाराले जनताको त परको कुरा आफ्नै कार्यकर्ताको समेत पेट नभरिने रैछ कमरेड बुझ्नु भयो हैन ?
जनक मान डंगोल/janakdangol@gmail.com
मन पर्छ भने खाँटी कुरो लाई लाईक गर्नुहोस !
लघुकथा -फाइदा !
By: janak dangol on August 19, 2014 / comment :0कथा
कथाकार: देब थापा
साढे नौ कप चिया पि'सकेपछी मैले साहुजी लाई अर्को एक कपको अर्डर गरे!
"होइन भाई, गर्मी को मौसम छ अनि त्यस माथि दश कप त भै सक्यो... म अरू चिया बनाउन सक्दिन या भनौ अब नपिउनु होस् !" उनले असमर्थता देखाए आत्मीयता पोतेर! उनी आफन्त झै पो देखिए... हो त्यस पछी चै मैले घर छेउको भट्टी वाल्नी संग बोलचाल र आवत जावत कम गरे! बाइस बाइस गिलास ठर्रा घुट्क्याउँदा पनि कैले ख्याल गरिन... मेरो ज्यानको!
चामलको मही बेच्ने को मन पनि देखियो!
खासमा म उनको प्रतीक्षामा थिए, बाटोमा यसै उभिनु भन्दा पसलमा बस्नु उपयुक्त लाग्यो... फेरी पसलमा यतिकै बस्नु पनि मिलेन.. उनको ढिलाई ले कप को संख्या बढ्दै थ्यो!
झन्डै अफिस टाइम को तीन घन्टा पछाडि उनी निक्लिइन्! मैले मुटुलाई जोरले समाते अनि एकशय साढे पन्ध्र शब्दको प्रेम पत्र निकाले ..जस्लाई परफ्यूमले नुहाएर राखेथे!
उनको नजिक पुग्नु अगावै पछाडि बाट कसैले धाप मार्यो.. "देव जी घर जानु भा'छैन?" प्रश्न सहित !
पछाडि फर्केको त बोस् डाँका ... अनि उनी पनि नजीक आइपुगीन, "सुन्दर कत्ति ढिलो गरेको तिमीले.. अहो! देव जी तपाईँ पनि ?" उनले एकातिर प्रेमील गुनासो अनि म तर्फ आश्चर्य फ्याकिन!
बोस् लाई तिमी संवोधन गरे पछि मैले कुरा बुझिहाले..अनि बोसको प्रेमील माफी अनि चाकान चुकुन के के हो के के.... दिमाग खराब!
प्रेमपत्र सहिद हुन सकेन न विजयी नै, "कति भयो दाई चियाको ?" म उनीहरू संग छुट्टिए की म संग उनीहरू ..यादै भएन!
"अब चियाको त पाँच रुपियाँ हो हजुरले थुप्रै पिउनु हुदोरैछ तीन रुपियाँको हिसाबले ३० दिनुन!" साहुजी फेरी नजिक आए!
जे होस् नाफाको बिस रुपियाँ लिएर ट्याम्पो कुर्न उभिए तर आफ्नै ठेगानको पचासौं ट्याम्पो ओहर दोहर गर्दा पनि मैले चढिन... किन किन!
गाडी हरूको आवत जावत बन्द भए पछि चै म एघार नम्मर गाडीमा थिए.. स्मरण रहोस् , एघार नम्बरको गाडी पनि पासाको भट्टीमा पन्चर भएको!
By: janak dangol on August 09, 2014 / comment :0कथा
बूढाबूढी, केटाकेटी तथा गृहणीमात्र रहेकाले राजुलाई गाउँमा बस्न लाज लाग्यो । बेरोजगार भए पनि खेतीपाती गरेर परिवार पालेकै थियो ।
- ‘कस्तो लाछी लाठे रहेछ ! यसो अरबतिर जानु, पैसा कमाउनु !
राजुलाई यो वाक्यले बारम्बर ठुँगिरह्यो । त्यसैले ऋण गरेर भए पनि स्थानीय एजेन्टमार्फत् ऊ खाडीतिर लाग्यो ।
मरुभूमिको प्रचण्ड धूप, खाना तथा पानीको कमी, कामको चाप एवं साहुको पेलानबाट राजु निरुत्साहित भयो । उदास भयो । डिप्रेसनको शिकार भयो । उसको मुखमण्डलबाट मुस्कानको लाली सर्लक्क पुछियो ।
श्रीमतीले उसको छायाछवि खोज्दै फोनमा भनी – ‘तपाईं त कस्तो निष्ठुरी ! विदेश गएको दुई वर्ष भयो, एउटा फोटो पनि नपठाउने ?’
पर्वको दिन उसले कामबाट छुट्टी पायो । साथीहरुसँग मिलेर ऊ एउटा ठूलो सपिङ मलमा गयो । यता हेर्‍यो, उता हेर्‍यो । धेरै ठाउँमा सोध्यो । अन्त्यमा फुटपाथमा गएर एक जोर राम्रा कपडा किन्यो ।
पार्श्वमा गगनचुम्बी महलहरु आउनेगरी साथीलाई एउटा फोटो खिच्न लगायो । कपडा चम्किला भए पनि उसको अनुहार औंशीको रातजस्तै थियो ।
- ‘कमसेकम फोटो खिच्ने बेलामा त एकपटक हाँस् !’
यन्त्रमानवले झैँ यन्त्रवत् चिज-हाँसो हाँस्यो, खिसिक्क ।
उसकी श्रीमती फोटो हेरेर दङ्ग परी – ‘आहा ! मेरा श्रीमानले त खुब सुख पाउनुभएको रहेछ विदेशमा । ठूलो सहर, राम्राराम्रा कपडा अनि मीठो मुस्कान… !’
https://www.facebook.com/sameer.rabindraबाट साभार !
लोग्ने-स्वास्नीको झगडा परालको आगो !
By: janak dangol on July 27, 2013 / comment :0कथा
झोडादेखी यत्रो साल सँगै बसियो खाइयो तर छेउघरे साइला साँइली झगडा गरेको कहिल्यै सुनेको थिएन । खै कुन्नी किन हो आज बिहानै साइला साइली ठुल्ठुलो स्वरले कराउदै बाझ्दैथियो । त्यो सुनेर छिमेकी बेलबोटे कान्छाले यसो झ्यालको एकछेउबाट चिहाएर हेर्यो । साँइली बलेसिमा खरेटोले बढार्दै फत्फताउदै थीइन । साइलोलाई निक्कै रिस उठेछ क्यार जुरुक्क उठेर साँइलीलाइ घोक्र्याउदै घरभित्र हुलेर भित्रबाट ढोका लायो । यता बेलबोटे कान्छाले सोच्यो ल्या .. अब मार्नेभो साइलाले ।
By: janak dangol on July 07, 2013 / comment :0कथा
देशमा आमुल परिवर्तन को लागी अब हामीले संघर्ष गर्नु पर्छ साथि हो ! गाउँ समाजमा रहेको शोषक तथा सामन्तीहरु लाइ ठिक पार्नु पर्छ भन्दै लडाकुको कमाण्डरको भनाइ सुनेर साइला तामांग पनि घरमा भर्खर भित्र्याएको जाहान लाइ छोडेर क्रान्तिमा भाग लिनु गो ! दिन, हप्ता ,तथा महिनौ बिते पश्चात एक रात साँझ आफ्नो प्यारीलाई भेट्न टुप्लुक्क आइपुग्यो ! घर गाउँ तिरको सबै हालखबर सन्चो बिसन्चो सोध्यो ! भरे भोलि भै सकेकी जाहानले सकी नसकी ढिडो ओडालीदिइन ! चुल्हो माथिको ताक बाट ढिक्को नुन र बारीको ढीडे खुर्सानी टिपेर गुन्द्रुक साधीन ! कुपू कुपू ढिडोको तालमा सुस्त सुस्त जोइ पोइको गफ गाफ भो ! बिहान भालेको डाक संगै साइलोले 'बस है माया .. नमरी बाचे कालले साचे भेट होलानी’ भन्दै दुइ जिउको जहाँन को मुखा पुलुक्क एक पल्ट हेर्यो अनि निस्केर गो ! माया बिचरा बोल्न सकिन ! मुटु बटारियो अनि मनमनै भनि 'कस्तो पापी रैछ निर्दयी आफु याहा भरे भोलि भाको छु' ! मनमनै आफ्नै भाग्य लाइ दोष दिंदै आँखा बाट तुरुक्क दुइ थोपा चुहाई ! अनि मनमनै भनि मेरो भाग्य नै खोटो रहेछ !
पर्सि पल्ट को कुरो हो पारि जंगलमा बिद्रोही र सेनाको दोहोरो भिडन्त चलेको छ रे भन्ने खबर गाउँ भरि फैलियो ! मायाले पनि सुनी मनमनै देउता पुकारी र भनी हे भगवान उसलाई केहि पनि नहोस ! लडाईको अग्र भागमा बसेर लडेको साइलालाइ दुस्मनको गोलीले कति खेर मुटु छेड्यो पत्तै भएन ! एकपल्ट ऐय्या र पानि भन्यो ! तुरुन्त मोर्चा बाट निकालेर मरहम पट्टि गर्न नपाउदै सकी नसकी कनेर 'ला..ल स...ला..म का...म...रे....ड' भन्ना साथ यो पापी संसारबाट बिदा भो ! लडाई थामिना साथ् पार्टीको नियम अनुसार पार्टीको झण्डा ओडाएर धेरै बहादुर साइलाहरु लाइ जंगलको खाल्टोमा बिदा गरे ! त्यहि बेला यता मायालाई व्यथाले चाप्यो ! केहि समयमा स्वस्थ राम्रो छोरालाई जन्म दिई ! भोलिपल्ट लडाकुको कमान्डर दलबल सहित माया लाइ भेट्न गो र भने तपाइको श्रीमानले बहादुरीको साथ लडेर सहिद हुनु भयो ! आज बाट तपाइँ सहिदको पत्नी हुनु भयो ! एउटाले खुसुक्क भन्यो हिजो उहाले छोरा पाउनु भएको रहेछ ! लडाकुको कमाण्डरले बहादुर साइलाको छोरा लाइ काखमा लिएर भने यसको नाउ राख्नु भो ? मायाले मुन्टो हल्लाउदै भनि छैन ! कमाण्डरले सबै गाउलेको अगाडी घोषणा गरे आजबाट यो बच्चो को नाउ हामीले 'क्रान्तिबीर' भनेर राख्यौ ! माया बोलिन टोलाई मात्र रही र उसले त्यो भिडमा उसको लोग्ने लाइ खोज्दैथि ! तर मायालाई यो ‘सहिद’ भनेको के हो थाहा पत्तै छैन ! पछी एक जनाले तेरो लोग्ने ता हिजोको भिडन्तमा मारियेछ भने पछी पो थाहा पाइन त्यो ‘सहिद’ भन्ने सब्दको अर्थ ! बल्ल थाहा पाई अनि भक्कानो छोडेर रोईन बरा ! न ज्यान देख्न पाइन न च्यान देख्न पाइन !
हिजो लडाइमा धेरै साइला तामांगहरु सहिद भए ! धेरैको सिउदो उजाडियो र कति गर्भे टुहुरा भए ! आज तिनिहरुले न्वारान गरिदिएका क्रान्तिबीर हरु कोहि गिट्टी कुट्दै छन ! कोहि उमेर ढाटेर खाडीमा जोतिन गएका का छन भने बाबु आमा दुवै गुमाएकाहरु महानगरमा फोहोरको थुप्रोमा प्लास्टिक केलाउदै बसेका छन ! आज तिनीहरु लाइ यों पापी संसारले क्रान्तिबीर हैन 'खाते' भनेर पुन: न्वारान गरि दिएका छन ! 'लाल सलाम' भन्ने हरुको क्रान्ति भनेको यस्तो हुदो रैछ ! के पायो त यो क्रान्तिले साइला तामांग हरुको सन्तानले ? माया यहि सोच्दै बसेकी छिन आज !
(यो कथा पूर्णरुपमा काल्पनिक हो ! कसैको घटना संग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ)
कटुवाल बाको सपना !
कटुवाल बा जवानीमा छदा कटुवाली काम गर्थे ! काम कुनै गारो थिएन ! सरकारी हुकुम तथा आदेस लाइ गामको चौतारी अथवा अग्लो ढिस्कोमा उभीयेर सबै गाउलेलाई सुनाउनु ! कटुवालीको अर्थ भनेको पनि यहि नै हो रे भन्थे बुढाले ! बुढाको काम बाट बडाहाकिम निकै खुसि भएर जग्गा जमिन प्रसस्त दिएका रैछन ! बुढाको परिवारमा श्रीमती र आफु सहित तीन छोरा १ छोरी ! गोठा चार हल गोरु, दुहुना गाइ भैसी, खसी, बोका र बाख्रा प्रसस्तै थियो ! पहाडमा जसको जग्गा जमिन तथा बस्तु भाउ धेरै छ उसैलाई सम्पन्न भनिन्छ त्यहि मध्येमा बुढा पनि पर्दा रैछन !
तामाको मुना जस्ता छोरा छोरीहरु हुर्कदै गए ! घरमा बुढीले धन्दा गर्न नभ्याउने, हम्मे हम्मे भएसी १४ बर्ष नपुग्दै जेठा छोराको बिहे गरि दिए ! स्वास्नीको पोइ भन्दै भाइ साथीले गिज्याउछ भनेर बिहे गरे पछी जेठो छोराले पढ्न मानेन ! केहि अन्तरालमा दुवै माइला तथा कान्छ छोराले गाउकै स्कुल बाट प्रबेसिका उत्तीर्ण गर्यो ! गाउँमा त के कुरा त्यो बेला सदरमुकाम मा समेत कलेज थिएन ! बुढाको चाहना छोराहरुलाई धेरै पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने धोको ! पठाई दिए पढ्नलाई सहरा ! बिस्तारै बिस्तारै जेठो छोरोले घर ब्यबहार धान्न थाल्यो ! एक दिन बुढीले भनी छोराहरु बिस र बाइस पुग्यो त बुढा अब बिहे गर्दिने हैन ? बुढाले एक छिन गम खाएर भने ठिकै भनिस बुढी म भोलि नै कुरा चलाउछु ! पुरेत बाजेलाई डाक्न पठाए, चर्चा चल्यो ! एक जना लमीले भन्यो पल्लो गाउँको जिम्माल बुढाको दुइटा छोरी छे हजुरको पनि दुइटा छोरा अनि जोडा पनि मिल्छ हुन्छ भने कुरा चलाउछु ! बुढाले पुरेत बाजे लाइ सोधे पुरेत बाजेले भने म पनि हेर्छु कुराचैँ चलाइ राखम ! कुरा चलाउदैमा केहि बिग्रने हैन क्यार ! समय हेरेर लमिले कुरा चलाए पुरेत बाजेले पनि हेरे अनि दुवै जनाले एकै स्वरमा कटुवाल बुढालाई भने स्वर्गकी अप्सरा जस्ती रैछिन दुइटी नै ! बुढाले छोरा झिकाए, छोराहरुले नाइँ नास्ती पनि गर्न सकेनन ! साइत हेरेर दुवै छोराको धुमधाम संग बिहे गरिदिए !..
छोरोहरु पुन सहर पढ्न गो ! बिस्तारै बिस्तारै गाउ टोलमा बहाल रहेको ब्यबस्था बिरुद्ध फरक गतिबिधि देखा पर्न थाल्यो ! जेठो छोरोलाई राजनीति संग कुनै लगाव थिएन ! उता सहरमा दुवै छोरा राजनीति गर्न थालेछन तर फरक धारमा ! माइलोले समाजबादी र कान्छोले कम्युनिज्म ब्यबस्था मन पराएर त्यसैमा खटन थालेछन ! जनताको बिद्रोहलाई सरकारले थेग्न सकेन ! ब्यबस्था परिवर्तन भयो ! केहि बर्षमा दुवै छोराहरु घर आए र भने बा हजुरकी बुहारी हरुलाई सहर घुमाउन लानु पर्यो ! बुढाले पनि नाइँ भन्न सकेनन हुन्छ भने ! तर छोराहरुले बुहारी घर फर्कायेनन ! घर छेउको छिमेकी काम बिषेसले सहर गाको थियो भेटेछ ! फर्केर आयेसी बुढालाई भन्यो कटुवाल बा हजुरको छोराहरुले त निक्कै प्रगति गरेका रैछन ! घर पनि दर्बार जस्तो बनाका रैछन ! मोटर गाडी, नोकर चाकर सब रैछ ! बुढाले कुरो ध्यान दिएर सुन्यो र भन्यो ए ! बल्ल किन बुहारीहरु लिन आका रैछन भनेर बल्ल बुढाले थाहा पाए !
दिनहरु बित्दै गो ! बुढा धेरै बर्ष भाको थियो सहर नपसेको ! जेठो छोरोलाई भन्यो हेर जेठा हामि हरु बुढा पनि भएयौ ! पितृ भोकाका होलान येसपाली पितृको नाउँमा सद्बिज छर्न जानु पर्यो ! छोराले किन नाइनास्ती गर्न सक्थ्यो र भन्यो हुन्छ ! दुवै भाइ लाइ खबर पठाकोमा माइला चैँ आयो र भन्यो किन बोलाउनु भाको बा ? दाजु चाहिले सबै कुरा बताए पछी भन्यो हुन्छ म बा आमाको चाहना पुरा गरि दिन्छु भनेर बुढा बुढी लाइ लिएर गये !
सहर गए पछी छोरा सधै व्यस्त आधा रातमा घर आउने ! पहिला आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने माइली बुहारी झर्कि फर्की गर्न थालि ! सद्बिउ छर्ने दिन पनि आयो तर माइलो छोराले नाक मुख देखाएन ! बुढा बुढी खिन्न भए, जे कामको लागि आका थिए त्यो काम पुरा गर्न पाएनन ! भोलि पल्ट बुढाले भने माइली बुहारी छोरो आयेसी मलाइ भेटाइ देउ ! छोरो आयो बुढाले भन्यो माइला ? कान्छा लाई भेट्न मन लाग्यो पुर्याई दिन्छस छोराले हुन्छ भन्यो ! घरमा आफ्नै गाडी थियो तर काम गर्ने लाइ बोलाएर ट्याक्सी लिन पठाये ! ट्याक्सीमा राखेर कान्छा छोराका पुर्याएर आए पछी बल्ल बुहारीले सन्तोषको सास फेरी ! सहर आयेसी छोरा बुहारी निकै परिवर्तन भएछ ! माइला ले वास्ता नगरे पनि कान्छाले गर्ला भनेर त आए ! कहिले आउनु बा भनेर त सोध्यो तर छोरा बुहारी कसैले पनि ढोगभेट मान मर्यादा केहि गरेनन ! सारै दुखि भए बुढा बुढी ! सद्बिउ छर्न आको तेरो माइला दाज्युले वास्ता गरेन ! कान्छा छोराले धोको पुरयाएर हास्यो र भन्यो बा पनि कुन दुनियामा हुनुहुन्छ ! यो देउता सेउता केहि हुन्न ! बुढाले एती मात्र भन्यो ए हो र ! कान्छो छोराको कुरा सुनेर औडाहा छुट्यो बुढालाई !
घरमा काम गर्न लाइ गाउँका केटि राख्या रैछन ! सारै मिठो बोलि बचन बोल्ने ! जेनतेन दुइ दिन बसे झल्झल गाउ घर सम्झिए ! भोलिपल्ट कान्छो छोरालाई भने हाम्लाई बस चढाई दे हामि गाउ फर्किन्छ्म ! देखावटी रुपमा पर्दैन जानु बा भनेका के थिए कान्छी बुहारीले आँखा तर्यो छोरालाई ! बुढाले भने भो बस्दिन सहरा, सक्छस भने बस अड्डा सम्म पुर्याई दे ! सक्दैन भने हामि आफै जान्छ्म ! छोरोले भोलि बिहानै पुर्याई दिन्छु भने ! बेलुका बुढाले बिस्तारै बुढीलाई भन्यो मैले तलाई अस्ति केहि पैसो राख्न देको थिएनी ! बुढीले थैलीमा जतन संग पट्याएर राखेकी रैछिन ! गनी हेर्दा एउटा हात्ती पाचवटा गैडा रैछ ! मनमनै सोच्यो यति भए गाउ पुगिन्छ !
भोलि पल्ट बिहानै उठे घरमा आफ्नै गाडी हुदा हुदै पनि माइलो छोराले जस्तै गरि ट्याक्सी बोलाएर राखेको रैछ ! हिड्ने बेला बुढाले काम गर्ने केटीलाई नानि सारै जाति रैछौ बस है भनेर हाता १०० रूप्पे थमाई दिदै भने पढ्न पनि बसेका रैछौ ! कापी कलम किन, राम्रो संग पढ है बा ! बुढा आफैले टिकट काटे तर छोरोले देख्या पनि नदेख्या जस्तो गर्यो ! छोरोले बस चढ्ने बेला केहि पैसो दिन खोज्दा बुढाले भने भो चाहिएन तेरो कमाइ ! जेन तेन घर आइ पुगे सारीरिक भन्दा पनि मानसिक रुपले थकित देखिन्थे आज कटुवाल बुढाबुढी ! कटुवाल बुढा बुढी सहर बाट आका छ रे भन्ने सुनेर गाउ छिमेक भरिका मान्छे जम्मा भए ! आइमेले बुढीलाई घेरे र नाली बेली सोध्न थाल्यो ! बुढी बनावटी कुरा गरेर आज सारै थकाई लाको छ पछी भनम्ला भन्दै भित्र पसिन ! आँसु चुहाउदै जेठो छोरोलाइ सप्पै कुरा भनिन बुडी माउले ! दाज्यु चाहिँ भाइ बुहारीहरुको नीच ब्यबहारले सारै दुखित भो ! यता बाहिर गाउले संग भला कुसारी चल्दै थियो ! बुढाले मात्र दुइ टुक जवाफ दिंदै भने 'गाउँको चरीलाई त गाउँ नै प्यारो हुदो रैछ' !
....... समाप्त .......
म कथाकार त हैन ता पनि जानी नजानी लेखेको यो कथा कस्तो लाग्यो हजुर हरु लाइ ?
डोकेको पिरिम !
By: janak dangol on May 26, 2013 / comment :0कथा
महान जनयुद्धलाई उचाइमा पुरयाउनु पर्ने भएकोले १ धुरी १ जना लडाइमा भाग लिन आउनु भन्ने कमाण्डरको उर्दी जारि भो गाउँमा ! घरा भाको एक मात्र बुढा बा आमालाइ चटक्क छोडेर एक्लो छोरो ठुले घर्ति लडाईमा भाग लिनुगो ! उमेर अलि पाको भाकोले उसको भागमा चैँ घाइते तथा सहादत प्राप्त गरेका लाइ सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने अर्थात डोके एम्बुलेन्स मा घाइते बोक्ने काम !
सिविरमा संगै रहदा बस्दा एक जना महिला छापामार संग पिरती बस्यो ! लडाइको दौरानमा माया पिरती सख्त निषेध ! माया प्रेमलाई कसैले पनी छेक्दैन भने जस्तै पिरतीचैँ लुकिछिपी चल्दै थियो ! सपना हज्जारौ थियो ! लडाई सके पछी बिहा गर्ने.. बुढा बाउ आमाको सेवा स्याहार गर्ने ! गरिबको सपना यस्तै नै हुन्थ्यो ! समयले कोल्टो फेर्दैथ्यो ! एक पछी एक एक गर्दै बर्ष दिनको अन्तरालमा बा आमा मास छर्न गए ! जन्मे पछी मर्नु पर्छ भन्दै मन लाइ सम्हाले ! मायालुले पनी सात्वना दिईन मन बुझाए !
ल यो हप्ता दुस्मन संग लडाई गर्न जानु पर्छ भन्ने उर्दी आयो ! सबै तम्तयार भए र लडाई लड्न गए ! लडाइमा दुबई पक्षका हताहत भए ! लडाई लड्न जानु भन्दा पहिला कसै कसैले त आफ्फ्नो लागि आफैले चिहान खन्थे ! किन यस्तो गरेको भन्दा लडाइमा बीरगति प्राप्त गर्यो भने साथि लाइ सजिलो हुन्छरे ! धेरै लडाइमा ठुले घर्तीले भाग लियो ! लडाइको अग्र भागमा लडाकु हरु बसेर लड्थे ! पछाडिको भागमा ठुले घर्ति हरु जस्तै बसेर हौस्याउथे ! कोह्ही घाइते वा मृत्यु हुना साथ डोका बोकेर कुदाइ हाल्थे ठुले घर्तीको टोलीले !
केहि हप्ता समय पछी फेरी युद्धमा जानु पर्ने भयो ! यो पाली काहा के नमिलेर हो लडाकु पट्टि निकै क्षेती भो ! घाइते र मृतक लाइ बोक्दा बोक्दा हत्ते भो ठुले घर्तिको टोलि ! कमाण्डरले अब लडाई जित्न सक्दैन भनेर चुपचापरुपमा फौज लाइ पछी हट्ने आदेस दिए ! सुरक्षित स्थानमा पुगे पछी गन्ति गर्दा धेरै क्षेती भएछ ! कमाण्डरले सान्त्वना दिदै भने ‘लडाइमा हार जित कुनै नौलो कुरा होइन’ ! सहादत प्राप्त गर्ने साथीहरुलाई खाल्डोमा पुर्नु भन्दा अगाडी सबैले अश्रुपूर्ण श्रद्दान्जली दिए अनि प्रण गरे र भने सहिदको रगतको बदला लिन्छौ ! ठुले घर्ति हरु खुइ खुइ गर्दै जंगला खाल्टो खन्दै थिए ! थकाइले गली सकेका थिए ! अघिल्लो लडाइमा दुस्मन संग लुटेको तुम्लेट बाट पानि निकालेर घुटुक्क पिए र आफ्नो भागमा परेको लास लाइ गाड्नु भन्दा अगाडी येसो पल्टाएर के हेरेको थियो हात खुट्टा थर्थरी भो ! ओठ काम्यो र पुरै पृथ्बी नै फनफनी घुमेको झैँ भान भो ! थच्चक्क भुइमा बसे टाउकोमा हात लाउदै ! मन लाइ सम्हाल्दै फेरी नजिक पुगे हिजो गरेको बाचा कसम याद सम्झना सबै चलचित्रको रिल झैँ मानस पटलमा आयो ! कमान्डर छिटो छिटो गर भन्दै थियो ! संगैको साथीले लास पुरी सकेपछी आएर भन्यो के भयो ठुले ? ठुले बोलेन हैन बोल्ने सब्द नै निस्केन, बोल्नै सकेन ! साथीले पुन झकझ्कौदै भन्यो ‘हैन के भयो तलाई आज ? अनि बल गरेर लास तर्फ औलाले देखाउदै भन्यो ... मेरी... जिन्दगि ..म रित्तिए बर्बाद भए भन्दै भक्कानो छोडेर रुन थाल्यो ग्वा ग्वा गरेर .....
(केहि महिना अगाडी मैले जीवनमा पहिलो पटक लेखेको कथा कस्तो लाग्यो ? पढेर प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छु !)